Ihotele entsha yaseW ithathe iZiko laseRUNWAY, Khanyisa isiXeko kwaye uhambe ngaphezulu kweNyanga, kuphela e-Changsha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iihotele kunye neeholide » Ihotele entsha yaseW ithathe iZiko laseRUNWAY, Khanyisa isiXeko kwaye uhambe ngaphezulu kweNyanga, kuphela e-Changsha
Iindaba zase China eziQhekezayo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba
"UW Changsha uphawula ihotele yase-W yesibhozo ukuvula e-China, enye yeemarike ezinefuthe kakhulu kwezohambo nakumashishini, kwaye sonwabile ukuzisa ii-W Hotels kwiindawo ezininzi kwilizwe liphela," utshilo uTom Jarrold, iNkokeli yeBrand Brand, W Iihotele kwihlabathi liphela. "Iidolophu ezinje ngeChangsha, ezinabahlali abagxile kwikamva kunye neemarike zeminyaka eliwaka ezikhula ngokukhawuleza ezinqwenela okutsha nokungalindelekanga, ziindawo zokudlala ezingenamida zikaW."
Ikamva leehotele livulwe ngoku.
Ihotele i-W kwihlabathi liphela imiselwe ukukhanyisa ikomkhulu kunye nesona sixeko sikhulu kwiphondo laseHunan, China, ngokuvulwa kwe-W Changsha namhlanje.
Iphethwe liQela leShishini likaHunan Yunda, eW Changsha, ihotele ibonakalisa umoya oqaqambileyo wesixeko esinexesha elininzi kunye nesiyilo esinomdla nesidlalayo esiphefumlelwe kukuhamba emajukujukwini.
Ifikeleleka ngokulula, i-W Changsha ingaphakathi kwemizuzu engama-30 ukuya kwisikhululo senqwelomoya i-Changsha Huanghua, imizuzu eli-15 ukuya kwisikhululo sikaloliwe i-Changsha South, kwaye idibanisa ngqo neBeijing-Hong Kong-Macau Expressway. Eyilwe yi-Cheng Chung Design (HK) Ltd eyaziwayo, u-W Changsha uthatha umngcipheko wokucinga ngokuthatha iifom ezintsha zoyilo lokubhiyozela ilifa elityebileyo lika-Changsha kunye nokubanamhlanje. E-China, i-Changsha ikwabizwa ngokuba yi "Star City" kwaye igama layo likhuthaza uyilo lwehotele olubonisa iipateni zejiyometri ezomeleleyo ezixutywe nemifanekiso ye avant-garde yangoku. Ukuthunyelwa ngokukodwa yihotele, ubugcisa bemizobo enje ngothotho lweSchrodinger's Cat kunye nofakelo lobugcisa lweZeta luphonononga imfihlelo yendalo iphela ngelensi yeW, ukudala iintlanganiso ezingalindelekanga kuyo yonke ihotele.
Ukufika kwabo eW Changsha, iindwendwe zibuliswa ngumqondiso we-logo yeW, ekhanyiselwe ukufana nomphezulu wenyanga. "I-Avenue yeenkwenkwezi," indawo exubeneyo yemithombo yeendaba edibanisa ubugcisa bedijithali, obusebenzisanayo kunye nesandi, ihambisa iindwendwe eRUNWAY, indawo yokufikela kwindawo eseGumbini lokuPhila, utyikityo lophawu, oluqhutywa ngokwentlalontle kwindawo yokwamkela iindwendwe yemveli. Apha, umfanekiso oqingqiweyo "wePepper Man" umema iindwendwe ukuba zijonge phezulu kwaye zimangaliswe ngokutsha yimimangaliso yendawo ngaphakathi kwimeko yesiko nenkcubeko yalapha eChangsha.
W Ukufika kuka-Changsha, Igumbi lokuhlala, RUNWAY
Amagumbi ehotele angama-345 namagumbi abandwendwela anikezela ngobunewunewu bale mihla kunye nobuchwepheshe obutsha, eneendonga ezibonisa iiplanethi, amaqela eenkwenkwezi, kunye nokufunyanwa kwe-nebulae nge "meow eye cabin" i-LED yesikrini ekopa ukuhlola indawo. Ukususela kwi-26th umgangatho ukuya kumgangatho ophezulu kwi-28thIbali elinezihlandlo ezithathu eligqithisileyo- I-WOW Suite (ithatha uphawu kwi-suite kamongameli) ibandakanya ngaphezulu kwe-1,000 yeemitha zesikwere zokuhlala kunye nendawo yokuphumla, kubandakanya igadi yabucala kunye nedama lokubhukuda, ukwenza indawo entle yeminyhadala yabucala eyandiswe inkonzo yokutyikitya kwehotele.
I-W Changsha ithembisa ukuba yeyona ndawo intsha yokutyela ii-foodies zalapha ngeendawo zokutyela ezintathu kunye nebar yendawo ekuyiwa kuyo. IZIQINISEKISO, indawo yokutyela yehotele imini yonke, inika amava okuntywila ngekhitshi evulekileyo enika ukutya kwasekhaya nakwamanye amazwe. I-SHINN YEN ibhiyozela inkcubeko ka-Changsha ngokutya kunye nobugcisa, ngendlela enomdla yokutya kwase-Hunanese ebonisa izincasa zalo mmandla. Rhoqo ngokuhlwa, imiboniso ye-cabaret ephilayo edityanisiweyo kunye ne-Hunan yemveli ye-opera iqhubela phambili iveza amava okutya. Ebusuku, RUNWAY yindawo yokuya ehotele apho zonke iindwendwe zithatha indawo yokubona nokubonwa. Ibha ikhanyisa ngomculo odlala umbane odibanisa ngokugqibeleleyo ii-cocktails ezenziwe ngesandla kunye nokulunywa okukhanyayo.
Iziganeko Khanya ngokuqaqambileyo eW Changsha
Ngaphezulu kwe-1,000 yeemitha zesikwere sendawo yokusebenza kumagumbi amahlanu abhetyebhetye, uW Changsha ubonelela ngamathuba angenamda wokubamba zombini iindibano zomsebenzi kunye nezentlalo. Kwifoyer, umfanekiso oqingqiweyo wegrafti kunye nomculo wepop "I-Fist Bump" eqingqiweyo-intetho yamazwe onke yokubulisa ngobuhlobo-ilindele iindwendwe njengoko zidibana ngaphambi komsitho womoya. Igumbi ngalinye leentlanganiso linemisebenzi emininzi kwaye lixhotyiswe ngetekhnoloji yakutshanje yokumamela ehlengahlengiswe kwiimfuno zomnyhadala othile. Phakathi kweentlanganiso, iindwendwe zinokuthatha ikhefu kunye noW Recess, indawo yokuqala ehotele ikhefu lekofu eneziselo ezahlukeneyo kunye nokukhethwa kokutya okwenzelwe ukuphakamisa nawuphi na umsitho.
ULAWULO. UKUQEQESHA. PHINDA.
Emva komsebenzi okanye ukudlala, iindwendwe zinokukhahlela ngakwichibi elibonisayo okanye zitshitshise kwi-WET®, ichibi elibanzi elinemifanekiso yemitha emithathu ye 'Space Cat'. I-24/7, enezixhobo zokuqina zomzimba ze-FIT zibonelela ngobunzima kunye ne-cardio kunye neeklasi zokudanisa ezimpompo zentliziyo ukutshisa iikhalori ngaphambi kokuba umbhiyozo uqale kwakhona. Kwiindwendwe ezihlala kwifilosofi 'Detox.Retox. Phinda' ifilosofi, i-AWAY SPA ilindele ukubuyisela kunye nokuvuselela ukukhanya kwayo.
"Siyavuya ukuqala i-W Hotels brand kumbindi China kwaye siphawula elinye inyathelo lokomfuziselo kuthi njengoko siqhubeka nokwandisa ipotifoliyo yethu yokuthengisa kwiimarike ezintsha kwilizwe liphela," utshilo uHenry Lee, uMongameli, iGreater China, Marriott International. "Njengokuba uhambo lwasekhaya luqhubeka luthabath 'unyawo, siza nezinto ezintsha nezinomdla ezifana no-W kwiindawo zokuzonwabisa ezikhulayo kweli."
Ngolwazi oluthe kratya okanye ngokwenza ugcino, ndwendwela wchangsha.com.